Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Sheekada Carruurnimada Kurt Zouma iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Buuxda ee ciyaartoy Faransiis ah oo xirfad-yaqaan ah oo leh naaneys “LaZoumance". Sheekadeena Carruurnimada Kurt Zouma oo ay weheliso Xaqiiqda Untold Biography Xaqiiqooyinka waxay kuu keenayaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, asalka qoyskiisa, noloshiisa shaqsiyeed, xaqiiqooyinka qoyskiisa, qaab nololeedkiisa iyo xaqiiqooyinka kale ee yar ee la yaqaan.
Haa, qof walbaa wuu ogyahay awoodiisa, awooda aqrinta ciyaarta iyo joogitaanka hawada. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa tixgeliya Kurt Zouma's Biography oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Kurt Zouma iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Bilaabidda, Kurt Happy Zouma wuxuu ku dhashay maalinta 27th ee October 1994 ee Lyon ee Faransiiska. Wuxuu ka mid ahaa carruurta 6 oo uu u dhashay hooyo yar oo caan ah iyo aabihiis Guy Zouma.
Kurt Zouma aabihiis - Guy. Astaanta Sawirka: 5foot5.
Muwaadinka Faransiiska ee dhalashada Madoow ee leh xididdada Afrika wuxuu ku dhashay meesha uu ku dhashay ee Lyon, France halkaas oo uu ku soo koray isaga iyo walaalkiis ka weyn oo loo aqoonsaday sida Lionel iyo 4 walaalaha kale.
Kurt Zouma waxaa lagu soo barbaaray Lyon ee dalka Faransiiska. Dhibcaha Sawirka: FPCP iyo WorldAtlas.
Markii uu ku barbaaray Lyon, da’da yar ee Zouma markii hore xiiseyneynin kubbadda cagta. Xaqiiqdii, wuxuu doorbiday kubbadda koleyga. Waqtigii Zouma uu da 'ahaan jiray 9, wuxuu isku dayay inuu kubad ka ciyaaro deegaanka Vaulx-en-Velin wuxuuna ogaaday inuu si aad ah ugu fiican yahay.
Sheekada Carruurnimada Kurt Zouma iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Waqti aan fogayn kadib markii Zouma uu bilaabay inuu u ciyaaro Vaulx-en-Velin, wuxuu waalidkiisii ​​u ballanqaaday inuu ciyaartaas sameyn doono. Sidaa darteed, wuxuu aad ugu shaqeeyay si uu ugu fiicnaado isboortiga isagoo tixgelinaya ujeeddada ugu sarreysa ee ah in waalidkiis lagu faano.
Kurt Zouma - 3rd laga soo bilaabo bidix safka 2nd - naadiga wiilka-Vaulx-en-Velin. Sumcada Sawirka: FPCP.
Intii uu joogay Vaulx-en-Velin, Zouma wuxuu lahaa aqoon dhammaystiran iyo xirfad shaqo oo kubbadda cagta ah taas oo keentay inuu isku dayo dhowr boos oo kala duwan ka hor inta uusan u noqon difaac ahaan. Lix xilli oo tababbar ah, Zouma waxay ku biirtay Akadeemiyadda Saint-Étienne asaga oo ah 15-sano jir 2009.
Sheekada Carruurnimada Kurt Zouma iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Nolosha Mudnaanta Hore
Waxay ahayd markii Vaulx-en-Velin in Zouma uu iftiimiyay xirfadiisa daafaca wuxuuna duubay meteoric koritaanka nidaamka dhalinyarada. Qaabkiisa ciyaareed ee sida sharafta leh u ciyaara ayaa durbadiiba soo jiitay dareenka saraakiisha naadiyada kuwaas oo doonayey inay sare u qaadaan ka hor xilli ciyaareedka 2011-12.
Kurt Zouma - 3rd laga soo bilaabo bidix booska taagan - kor u kaca Vaulx-en-Velin. Sumcada Sawirka: FPCP.
Sidaa daraadeed, Zouma wuxuu qandaraaskiisii ​​ugu horreeyay ee xirfadda leh la saxiixday Saint-Étienne 2nd ee Abriil 2011 wuxuuna u saftay xirfaddiisa kooxdii ugu horreysay intii lagu guda jiray Coupe de la Ligue kulankii Bordeaux ee 31st August 2011. Wuxuu sii waday inuu ka caawiyo Saint-Étienne inuu ku guuleysto Coupe de la Ligue ee 2013 wuxuuna rajeynayay mustaqbal wanaagsan oo naadiyada heerka sarre ah.
Sheekada Carruurnimada Kurt Zouma iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Waddada loogu talagalay sheekada
Zouma wuxuu rajeynayaa inuu sare u sii kaco ugu dambeyntiina wuxuu ku dhacay 2014 markii uu u saxeexay kooxda Ingiriiska ee Chelsea heshiis shan sano iyo bar ah oo uu ku kacayay £ 12 milyan (€ 14.6 milyan).
Si kastaba ha noqotee, u dhaqaaqista ciyaaryahanka ee kooxda iyo rabitaankiisa kulankiisii ​​ugu horeysay ee dhaqso uma deg deg aheyn sida uu filayay madaama Chelsea ay amaah ku siisay Saint-Étienne inta ka dhiman xilli ciyaareedka.
Chelsea ayaa ku amartay Kurt Zouma's Saint-Étienne ka dib markii ay la soo saxiixdeen 2014. Astaanta Sawirka: Sportsmole.
Sheekada Carruurnimada Kurt Zouma iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Sare u qaado sheekada
Daafaca dhexe ayaa ugu dambeyntii saftay kulankiisii ​​ugu horeysay ee halyeeyga Chelsea kulan saaxiibtinimo ka hor xilli ciyaareedkii ay la ciyaareen Wycombe Wanderers. Clad wuxuu la qaatay lambarka Jersey ee 5, wuxuu ka saaray guulo cajiib ah ololihiisii ​​ugu horreeyay ee buuxda isagoo ka caawiyay Chelsea inay ku guuleysato League Cup iyo horyaalkii ugu fiicnaa ee 2015.
Kurt Zouma wuxuu kula guuleystay Chelsea Premier League 2015. Astaanta Sawirka: TransferMarket.
Kurt Zouma waa koox ka mid ah kooxda koowaad ee kooxda Chelsea waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay “daafaca ugu dambeeya” xawaaraha, boodada, gudbinta, toogashada iyo xirfadiisa. Inta soo hartay, sida ay yiraahdeen, waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada Kurt Zouma iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyinka nolosha qofka
Kurt Zouma waa la guursaday waqtiga qorista. Waxaan kuu soo qaadanaa xaqiiqooyin ku saabsan taariikhdiisa shukaansiga iyo nolosha guurka. Markii hore, Zouma lama yaqaan inuu guursaday gabadh ka hor intaysan la kulmin xaaskiisa Sandra.
Qeybta ugu fiican waa muwaadin Faransiis ah oo labo sano ka weyn Zouma. Zouma wuxuu jiray 19 sano jir markii uu guursaday iyada 2012. Guurkoodu wuu sii xoogaysanayaa oo wuu barakeeyey laba carruur ah - wiil iyo gabadh - wakhtigii qorista.
Kurt Zouma oo leh xaas iyo caruur. Astaanta Sawirka: TheSportReview.
Sheekada Carruurnimada Kurt Zouma iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyinka Nolosha Qoyska
Kurt Zouma waxay ka timid asal qoys hoose. Waxaan kuu soo qaadanay xaqiiqooyin ku saabsan noloshiisa qoys.
Ku saabsan Kurt Zouma aabihiis: Zouma aabihiis waxaa lagu aqoonsaday magaca - Guy. Waa muwaadin Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo u haajiray Faransiiska isagoo raadinaya daaq cagaaran sanado badan kahor Zouma dhalashadiisa. Intii uu ku sugnaa Faransiiska, Guy wuxuu aad ugu shaqeeyey sidii uu u daryeeli lahaa qoyskiisa wuxuuna badanaa u kaxayn jiray Zouma tababarka. Kurt wuxuu ku amaanayaa aabe caawiyaha ah inuu ogyahay goorta la adkeynkaro iyo u dabacsanaandoono carruurtiisa.
Kurt Zouma aabihiis, Guy. Sawirka Sawirka: 5foot5.
Ku saabsan Kurt Zouma hooyadeed: Zouma waxay leedahay hooyo yar oo caan ah oo u shaqeysa sidii nadiifiyaha. Waxay ku daneyneysaa danaha weyn ee cayaaraha Zouma waxayna joogtay markii daafaca dhexe uu saxiixay qandaraaskiisii ​​ugu horreeyay ee xirfadeed ee St. Etienne isagoo jira 16-sano jir. La yaab ma leh inay xakamayn kari weyday ilmada farxadeed markii lagu dhawaaqay in Zouma uu u saxeexay Chelsea 2014. Hooyada taageerada leh waxay marwalba kula talisaa Zouma inuu diirada saaro kulamadiisa oo uu weli yahay taageereyadiisa ugu weyn.
Ku saabsan Kurt Zouma walaalkiis: Kurt wuxuu leeyahay walaalo '5' oo ay kujirto gabar walaashiis ah oo aan aad looga aqoon. In kasta oo Zouma ay wadaagaan xiriir dhaw, hadana wuxuu aad ugu sii dhowyahay walaalkiis ka weyn ee Lionel kaasoo ku dhiirigaliyay inuu ciyaaro kubada cagta. Lionel wuxuu u ciyaaraa kooxda heerka seddexaad ee Bourg-en-Bresse waqtiga qorista. Dhiniciisa, Zouma waxay u adeegtaa sidii saameyn firfircoon oo saameyn ku leh walaalkiis ka yar Yoan oo u ciyaara Bolton Wanderers.
Kurt Zouma walaalo. Astaanta Sawirka: Instagram
Ku saabsan Kurt Zouma qaraabada: Ka fog reeraha Zouma, wax yar baa laga ogyahay awooweyaashiisii ​​iyo awowyadii awoowe iyo ayeeyadood. Sidoo kale, wax badan lagama garanayo adeeradii Zouma, abtiyaashiis, abtiyaashiis iyo abtiyaashiis halka ilma adeerkiis aan lagu aqoonin dhacdooyin caan ah noloshiisa hore ilaa maanta.
Sheekada Carruurnimada Kurt Zouma iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyinka Nolosha Nolosha
Maxaa Kart Zouma saxeexay? Dib u fadhiiso marba markaan kuu soo qaadanayno waxyaabo ku saabsan shaqsigiisa si aan kaaga caawino inaad sawir buuxa ka hesho isaga. Si loo bilaabo, Zouma shaqsiyeedkiisa waa isku darka astaamaha shakhsiyadeed ee Scorpio zodiac.
Waa nin jecel, shaqo badan, dareen leh oo dhexdhexaad ah muujiyana xaqiiqooyin la xiriira noloshiisa shaqsiyeed iyo tan gaarka ah. Wuxuu leeyahay daneyno iyo hiwaayado dhowr ah oo ay ku jiraan ciyaarista ciyaaraha fiidiyowga, daawashada waqtiyada, joogteynta ciyaaraha kubbadda koleyga, safarka iyo waqti fiican la qaadashada asxaabta iyo qoyska.
Kurt Zouma wuxuu u daawadaa anime sidii wax looqabo. Astaanta Sawirka: Instagram
Sheekada Carruurnimada Kurt Zouma iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyinka hab nololeedka
Kurt Zouma waxay leedahay qiyaasta saafiga ah oo kor u dhaaftay $ 5 Million waqtiga qoritaanka. Asalkiisu taajirnimadiisa wuxuu ka soo jeedaa mushaharka uu ka helo dadaalladiisa kubbadda cagta iyo sidoo kale heshiisyada uu ka helo.
Sidaas darteed daafaca dambeedka waxaa loo siiyay inuu qarash gareeyo wuxuuna leeyahay hanti sifiican ugahadlaya qaab nololeedkiisa sida gurigiisa oo ku yaal Lyon ee France iyo sidoo kale wadooyinka gawaarida qalaad oo ay ku jiraan Porsche Panamera gawaarida kale.
Kurt Zouma waxaa lagu sawiray mid kamid ah safarradiisa qalaad. Astaanta Sawirka: WTFoot.
Sheekada Carruurnimada Kurt Zouma iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Si aad u soo qaadatid sheekadeena carruurnimada Kurt Zouma iyo taariikh nololeedka, halkan waxaa ku yaal xaqiiqooyin aan lagu darin noloshiisa.
Zouma waxaa la siiyay magaca koowaad “Kurt” kadib Kurt Sloane, astaamihii Jean-Claude Van Damme ee filimka 1989 ee 'Kickboxer', iyada oo ay ugu wacan tahay in waalidkiis ay aad ula yaabeen ka dib markii ay daawadeen jilitaanka xiisaha leh ee filimka. Magacdiisa '' Farxad '' wuxuu la jaan-qaadayaa dhaqankii Afrikaanka ahaa ee loo adeegsan lahaa ereyo wanaagsan magacyada dhexe.
Kurt Zouma waxaa loo magacaabay Kurt Sloane, oo ah astaamaha Jean-Claude Van Damme ee 'Kickboxer' (1989) Astaanta Muuqaalka: Mirror.
Tilmaamo ma leh markii la qorayay, kumana arag wax khamri ah ama sigaar cabin.
Kurt Zouma ma leh tattoos waqtiga qoraalka. Astaanta Sawirka: Instagram
Marka laga hadlayo diintiisa, Zouma waa qof Muslim ah oo u heellan arrintaas. Waxaa taas ka sii daran, wuxuu tukanayaa shan jeer maalintii oo waxaa lagu arkay isagoo xajka tagaya bisha Agoosto 2018.
Kurt Zouma xajka Paul Pogba iyo asxaabta. Sawirka Sawirka: Twitter.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrintayada Kurt Zouma Sheekooyinka Carruurnimada oo ay weheliso Xaqiiqda Taariikh nololeedka Untold. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Chelsea FC Ciyaartoyda hadda
Stoke City Taariikhda Kubadda Cagta
Bafetimbi Gomis Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Kevin Gameiro Storyhood Plus Xogta Wargelinta Lahaanshaha
Karim Benzema Sheeko Sheeko Xaqiiqo Weyn
Kingley Coman Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Aan Laheyn
Hugo Lloris Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha Xaddidan